Arsenal oo ballan qaadday inay Booliska kala shaqeyn doonto weerarkii loo geystay Nicolas Pepe iyo Ezgjan Alioski – Gool FM
(London) 23 Nof 2020. Kooxda kubadda cagta Arsenal ayaa Booliska London ku war gelisay inay diyaar u yihiin la shaqeyntooda ku aaddan baarista aflaggaadaddii jinsi faquuqa ahayd ee loo geystay xiddigeeda Nicolas Pepe iyo laacibka kooxda Leeds United ee Ezgjan Alioski.
Labada xiddig ayaa isku dhacay intii ay socotay kulankii labada koox ay xalay wada ciyaareen, waxaana ay taasi sababtay in casaan loo taago 25-sano jirka garabka kaga ciyaara Gunners kaddib markii uu madaxa la dhacay ama herti ku dhuftay Alioski.
Dhacdadaas kaddib, taageereyaal aan dhaqan wanaagsaneyn ayaa aflagaaddo jinsi faquuq ah kula kacay labada xiddigba.
Balse Arsenal ayaa soo saartay war qoraal ah oo dhignaa: “Waxaan si buuxda u cambaareyneynaa aflagaaddada baraha bulshada loogu geystay Nicolas Pepe iyo Ezgjan Alioski kaddib ciyaartii aan la qaadannay Leeds United”
“Tani waa mid aan la aqbali karin, waxaanna Booliska iyo dambi baarayaasha kala shaqeyneynaa sidii loo soo qaban lahaa dambiilayaasha.” ayay Gunners ku qortay bogaggeeda baraha bulshada ee dhinaca Internet-ka.